Al-Shabaab oo Todabaad gudihiis Toogasho ku fulisay 18 Ruux – Idil News
Al-Shabaab oo Todabaad gudihiis Toogasho ku fulisay 18 Ruux
Kooxda Al-Shabaab ayaa galinkii dambe ee shalay fagaaro ku yaalla degmada Jamaame ee Gobolka Jubbada Hoose, waxa ay ku toogtay Afar ruux oo mid ka mid ah ay haweeney aheyd.
Al-Shabaab ayaa saddex kamid ah dadkaas ku eedeeysay inay la Sahqeynayeen Ciidamada Dowladda iyo dowladaha taageera.
Boqolaal ka mid ah Shacabka degmada Jamaame ayaa tegay goobta toogashada, kuwaas oo Al-Shabaab ay ku amreen inay goobta tagaan si ay u daawadaan, waxana dadlka la toogtay Magacyadooda lagu kala sheegay.
1: Sulaymaan Maxamed Saciid oo da’diisa lagu sheega 21 sana jir ayaa Al-Shabaab ku sheegeen in uu ka tirsanaa Ciidamada Booliska Soomaaliya ee ka howlgeli jiray Magalada Muqdisho & degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose.
2: Yariisow Baaf Cusmaan (Maye) oo da’diisa lagu sheegay 68 jir ayaa Al-Shabaab waxaa ay ku eedeeyeen in uu katirsanaa Maamulka degmada Diinsoor,isla markaana uu sigaar ah ula Shaqeyn jiray Ciidamada Itoobiya.
3: -Iqra Cabdi Aadan oo jirtay da’ada 20 ayaa Al-Shabaab waxaa ay ku eedeeyeen inay la Shaqeyn jirtay Sirdoonka dalka Kenya,isla markaana ay ka howlgeli jirtay Magalada Mandheera ee Gobolka Waqooyi bari dalka Kenya.
Ugu dambeyn Ninka Afaraad oo lagu Magacaabi jiray Nuur Bakar Diiroow ayaa Al-Shabaab waxaa ay ku eedeeyeen in uu kufsaday gabar ka mid aheyd dadka deegaanka, isaga oo guur horay u soo maray, waxana goobta oo ay ku sugnaayeen boqolaal Ruux dhagax lagu dilay
Si kastaba, Al-Shabaab ayaa Bishaan gudaheeda waxaa ay fagaarayaal ku yaalla deegaano ka tirsan gobolada Jubbooyinka iyo Shabeellaha Hoose waxaa ay ka fuliyeen xukuno dil ah, iyada oo la toogtay 18 Ruux oo mid ka mid ah ay haweeney aheyd.